Warbixin: Mustaqbalka John Terry, Qaab CIyaareedka Hazard, Siyaasada Suuqa Ee Kooxda Iyo Waxyaabaha Horyaala Inuu Xaliyo Macalinka Cusub Ee Chelsea Antonio Conte | Haqabtire News
Warbixin: Mustaqbalka John Terry, Qaab CIyaareedka Hazard, Siyaasada Suuqa Ee Kooxda Iyo Waxyaabaha Horyaala Inuu Xaliyo Macalinka Cusub Ee Chelsea Antonio Conte
Chelsea ayaa xaqiijisay in Antonio Conte uu noqon doono maclainkooda xili ciyaareedka danbe kadib marka uu soo dhameysto waajibaadka xulkiisa qaranka ee Italy, hadaba maxay yihiin waxyaabaha ugu waa weyn ee horyaala ? Laacib.net ayaa eegeysa. =
Xalinta Mustaqbalka John Terry.
Chelsea ayaa u muuqata kuwo weyn doona mid kamid ah xidigaha ugu waa weyn taariikhdooda, xidiga ugu guukaha badan kooxda, kabtankoioda haatan iyo halyeeygooda, 35 jirkaan ayaa hore u sheegay inuu kooxda ka tagi doono kadib dhamaadka xili ciyaareedkaan laakin miyuu Conte badali doonaa arintaas ?
Waxaa jira warar sheegay in Conte uu u furan yahay inuu John Terry kooxda ku sii hayo sanad kale wuxuuna doonayaa inuu ka faa’ideysto khibrada uu xidigaan u leeyahay qolka labiska kooxda.
Ka Caawinta Hazard Ku laabashada Heerkiisii Sare
Wey adag tahay inaad xusuusato ciyaartooyda badan oo qaab ciyaareedkooda uu markaliya u lumay sida Eden waliba waqti sidaas u yar, xidigii ugu fiicnaa horyaalka ingiriiska xili ciyaareedkii 2014-15 ayaa markale waayay wixii uu daafacyada ku argagax galin jiray wuxuuna u dhibtooday xili ciyaareedkaan si walai ah walina wax gool ah kama uusan dhalin horyaalka ingiriiska ilaa haatan.
Sidoo kale wuxuu isku dayay inuu ka tago garoonka Stamford Bridge, isagoo sheegay bishii February iney adag tahay in la iska diido dalab uu ka helo Paris Saint-Germain inkastoo uu kooxda kula jiro qandaraas ilaa sanada 2020 ka ah.
Maamulka Siyaasada Suuqa:
Jose Mourinho ayaa lagu eedeeyaa qaab ciyaareedka liita ee ay kooxda la soo baxday xili ciyaareedkaan laakin waxay maamulka sare eeda ka qaadanayaan dhankooda maadaama aysan si buuxda uga saacidin syyqa.
Ma jiro saxiix ay sameysay kooxda xagaagii oo lagu najaxay iyadoo dhamaan Radamel Falcao, Abdul Rahman Baba, Papy Djilobodji iyo Pedro ay fashilmeen sidaasoo kale waxaa laga dhihi karaa Alexandre Pato, kaasoo kooxda yimid xagaagii inkasto kaliya hal kulan uu saftay shaqo fiicana uu qabtay laakin waqti badan ayuu ku lumiyay soo kabasho.
Wey cadahay in Conte uu u baahan yahay dib u habeyn weyn laakin miyeey kooxda soo jiidan kartaa ciyaartooy waa weyn iyadoo aan ciyaaren tartamada yurub ? Kooxda ayaa durbaba lala xiriirnayaa xidiga khadka dhexe ee Roma Radja Nainggolan kan Juve ee Paul Pogba inkastoo helitaanka xidiga ree France ay u muuqato kaliya riyo maadaama ay ku dagaalamayaan saxiiixiisa kooxaha Madrid iyo Barca, sidoo kale macalin ayaa doonayay in lasii hayo Diego Costa laakin waxay u baahan doonaan in meesha laga saaro Loic Remy iyo Falcao.
Fursad siinta Da’yarta:
Romelu Lukaku iyo Kevin de Bruyne ayaa labadaba qaadanaya waayo ciyaareedyo cajiib ah kadib markii ay labadaba kaga tageen Stamford Bridge fursad la’aan, haatan waxaa kooxda ku jira Ruben Loftus-Cheek, Matt Miazga iyo Bertrand Traore laakin macalinkaan ayaa looga fadhiyaa inuu kala doorto raacista nidaamkii Mourinho uu iska fogeeyo da’yar ama inuu fursado siiyo caruur badan oo mustaqbal leh.
Il U Yeelashada Xidigaha Amaahda Ku Maqan:
Tani ma sahlana, in ka badan 30 ciyaartooy ayaa kooxda amaah kaga maqan, hadaba miyaa Patrick Bamford amaah lagu diri doonaa markii lixaad ? Miyaa Juan Cuadrado dib looga soo celin doonaa Juventus? Miyu Michael Hector diyaar u yahay ka ciyaarista Premier League ? Mohamed Salah uma muuqda mid kasoo laabanaya Italy laakin maxaa u xal ah Moses, maxaase laga yeeli doonaa amaahyadii Falcao iyo Pato ee fashilmay ?